Soo -saareyaasha wiishka boom ee Shiinaha oo go'an | GBM
Hordhac kooban oo Wiish boom ah oo go'an,wareejin buuxda oo go'an, rafaad hal gacan ah, luffing racking, dheelitirnaanta dheelitirka nool, taageerada dhululubada, waxayna fulisaa hawlgalinta raridda iyo soo dejinta xamuulka weyn ama xamuulka baakaysan iyadoo la isticmaalayo qabasho ama jillaab. Mashiinkani wuxuu adeegsadaa xakamaynta soo noqnoqoshada AC, koontaroolka PLC, iyo rakibay "nidaamka kormeerka iyo xakamaynta gobolka" ee caqliga leh.
Hordhac kooban Wiish boom ah oo go'an, wareejin buuxda oo go'an, rafaad hal gacan ah, luffing roffing, dheelitirka dheelitirka nool, taageerada dhululubada, waxayna fulisaa hawlgalinta raridda iyo dejinta ee xamuulka badan ama xamuulka baakaysan iyadoo la isticmaalayo qabasho ama jillaab. Mashiinkani wuxuu adeegsadaa xakamaynta soo noqnoqoshada AC, koontaroolka PLC, iyo rakibay "nidaamka kormeerka iyo xakamaynta gobolka" ee caqliga leh. Waxay leedahay astaamaha muuqaalka quruxda badan, shaqo aamin ah oo la isku halleyn karo, waxqabad sare leh, dayactir ku habboon, cimri dherer sare iyo wixii la mid ah. Waxaa si baaxad leh loogu adeegsan karaa hawlgallada raridda iyo soo dejinta dhinacyo kala duwan oo webiga iyo terminal -ka dekedda badda.
Halbeegyada Farsamo ee Ugu Weyn
Awood qaadista 16t (qabasho) 16t (jillaab)
Darajada shaqada A7
Heerka shaqada Ugu badnaan/Min. 25m/9m 25m/9m
Dhererka kor u qaadista / Dusha sare/ sagxadda hoosteeda 7m/8m 12m/8m
Xawaaraha shaqada ee Farsamada Farsamada qaadista 58m/daqiiqo
Farshaxanka barafka 40m/daqiiqo
Farsamada Rotary 2.0r/min
Awoodda La rakibay 310KW
Ugu badnaan xawaaraha dabaysha ee shaqeeya 20m/s
Maxaan shaqaynayn xawaaraha dabaysha 55m/s
Meesha ugu badan ee dabada leexashada 6.787m
Koronto AC380V 50Hz
Miisaanka wiishka ≈165t
Fiiro gaar ah: Xuduudaha kor ku xusan ee waxqabadyada kiisaska jira ee cabbirrada farsamo ee qaangaarka ah waa tixraac keliya. Waxaan naqshadeyn karnaa oo soo saari karnaa badeecadaha iyadoo la raacayo shuruudaha isticmaalaha. Waxaa jira qaabab kala duwan oo ka soo jeeda wiishka la heli karo ee macaamiisha ay doortaan.
Hore: Wiishka saqafka sare ee jugta leh
Xiga: Wiishka badda oo aad u adag
wiishka dheecaanka badan
wiishka boomka daaqadda
Laba xadhig clamshell qabsado
Fidiyaha tooska ah ee jillaab otomaatig ah
Wiishka Dheelitirka, wiishka Haydarooliga, wiish kalluumeysi, wiishka sagxadda, candhuufta telescopic wiishka boom, wiishka badda, Dhammaan Alaabta